Ukuphupha iGabel ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iimela, iifolokhwe kunye namacephe zizinto zemihla ngemihla ezingasenakho ukucinga namhlanje. Yonke imihla, amaxesha ngamaxesha sisebenzisa ukutya kwethu okusika.
Nangona ifolokhwe yenye yezinto esizithatha ngokungakhathali, kodwa kunzima ukuyenza ngaphandle, kwimihla yethu yemihla ngemihla, inokuba nentsingiselo enzulu, ukuba siyaphupha. Kodwa yintoni eyona nto ifuzisela oku? Ifolokhwe ithini ephupheni ngathi nangobomi bethu?
1 Uphawu lwephupha «ifolokhwe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ifolokhwe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ifolokhwe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ifolokhwe» - ukutolikwa ngokubanzi
Okokuqala, ifolokhwe, ineeprong ezintathu ephupheni, imele uphawu lomtyholi kwaye, ngokoluvo ngokubanzi, kuthetha Mal y UbungqongqoUbundlongondlongo kunye nesoyikiso. Ngokunokwenzeka, iphupha eli liya kuqhathwa kwixa elizayo ngumhlobo okanye lisongele iingxabano ezinkulu kusapho. Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka ulungiselele ngaphakathi ixesha elingathandekiyo ukuqala okanye ukuba ukhathazeke ngento ethile.
Nangona kunjalo, yonke imeko yephupha kufuneka ihlale ihlolwa ukutolika ngokupheleleyo iphupha. Ke ezinye iisimboli zamaphupha, ezifuna ukuqondwa ngokuqinisekileyo, zinokugqitha kwizinto ezimbi zemfoloko!
Ukongeza, ifolokhwe nayo ingangumqondiso wephupha. ukungaqiniseki kwangaphakathi zimele. Umphuphi akazi ebomini bokwenene ukuba ufuna ntoni, okanye ebomini bakhe. Oku kungazithembi kukuthintela ekufikeleleni kwiinjongo ezithile kunye nokukhula ngakumbi ebomini. Ke ngoko, kuya kufuneka uzame ukuhlengahlengisa ezakho izimvo kwaye ucinge malunga nokuba yintoni kanye kanye oyifunayo. Kungenxa yokuba kuphela xa ucinga ngesiqu sakho unokuphumelela.
Ukongeza kwezi zinto zinokwenzeka, abantu banako iphupha lokubona okanye usebenzise i-hairpin. Oku, endaweni yoko, kufuneka kujongwe ngokuqinisekileyo: umntu ochaphazelekayo uya kuba nempumelelo kwilixa elizayo. Ye mpu melelo Ingabhekisa kokubini imeko yabucala kunye nemicimbi yezemali okanye yorhwebo.
Uphawu lwephupha «ifolokhwe» - ukutolikwa kwengqondo
Ifolokhwe sisixhobo kwaye ke ifuzisela into eluncedo. Ukuphupha kunikezelwe kukuqonda kwengqondo kubomi bokwenyani. iintshukumo ezijolise kwinjongo kwaye inemveliso. Ngale ndlela, uphawu lwephupha lunokuba nenqaku lokuba izinto ezingokweemvakalelo azikhathalelwanga kubomi bakho bemihla ngemihla kwaye kuya kufuneka ubanike nexesha elingakumbi.
Ngexesha elifanayo, nangona kunjalo, iingcebiso zezipho zinokusetyenziselwa Abaxhasi isikhundla, ngokutsho kwabanye babahlalutyi bengqondo esinokuba sisalathiso sokuba iphupha elo lijongise kwicala elingafuni ukuthatha.
Nabani na ohlaba ukutya ngemfoloko ephupheni ngaphandle kokutya kunye nokungakhathali unokuhambisa oku kubomi babo bokwenyani. Kunyanzelekile amandla amancincibazinikezele kwimisebenzi ethile kunye nemisebenzi.
Uphawu lwephupha «ifolokhwe» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, imfoloko ephupheni luphawu lwento ebalulekileyo kwaye kunzima ukuyibetha. isigqibo. Mhlawumbi ukuphupha kufuna uncedo lwabanye.